FADINTSERANANA : Manao tohivakana ny hosoka ataon’ny orinasa Tafaray | NewsMada
Efa namaky am-batolampy ny resaka hosoka tanterahin’ny orinasa Tafaray izahay teo aloha teo, momba ny fanambarana hosoka nataon’izy ireo. Nandritra ny karazana fanadihadiana notontosaina tamin’ireo antontan-taratasy isan-karazany, momba ny fanafarana entana avy any Emirats-Arabes-Unis, izay mahakasika ny fanafarana entana 10 kaontenera, voalaza fa menaka. Tany Maorisy no nandalovany izay vao tonga aty Madagasikara. Mbola miseholany ny fanambarana hosoka tanterahin’ity orinasa Tafaray ity…
Manao tohivakana ny fanambarana hosoka tanterahin’ny orinasa Tafaray hatramin’izao. Efa namaky bantsilana io fanambarana hosoka io ny teto amin’ny gazety, ny volana avrily teo. Ny herinandro lasa teo, nisy ny entana nafarana izay voalaza tao anaty antontan-kevitra fa entana mitontaly 10 kaontenera, izay voalaza fa “potato chips”. Raha ny fantatra, entana mahatratra hatrany amin’ny 13.330 isa ny fitambarany izay ahitana damozana menaka mitontaly 20 isanisany, vita avy any Malaisie ary naondran’ny orinasa “Unimex General Trading FZE” avy any Auman, Emirats Arabes-Unis. Ny mpanafatra ireo entana ireo dia ny Orinasa Fred Import ao Ambolomadinika Toamasina, izay fantatra fa ao anatin’ny orinasa Tafaray. Rehefa tonga tao amin’ny seranan-tsambon’ny Port Louis, Maorisy ireo entana ireo, dia ny orinasa Rhea Limited no mandray an-tanana azy ireo halefa aty Madagasikara, izay toeran-kitodiana.
Mandritra ny dingana rehetra tanterahina, voalaza mazava amin’ny antsipiriany ao anaty faktiora fa “vegetable cooking oil-palm” na menaka fahandro, izay mitentim-bidy hatrany amin’ny 290.280 dolara amerikana. Ny laharam-pamantarana (769627189) izay mitovy tsy misy valaka tao anatin’ny antontan-taratasy manokan’ny fitondran-draharaham-panjakana. Kanefa, ny manaitra tao anatin’ny antontan-taratasy sy ny fanambarana natao teo anivon’ny fadintseranana notontosain’ny orinasa Tafaray, mitondra ny laharana C16206, mitondra ny datin’ny 13 mey 2017 araka ny tatitra farany, fa ovy efa voavoatra tahaka ny “potato chips”, araka ny famaritana ny entana.
Mitady hirika amin’ny fomba rehetra
Voaporofo fa tena tsy ifandraisany amin’ilay menaka fahandro ny entana tonga. Ny tanjona amin’izao fanambarana hosoka sy diso izao, ny handoavan’izy ireo ny hetra kely indrindra araka izay azo atao, indrindra raha sakafo voavoatra vita amin’ny ovy tahaka ny “chips”. Ny fiafaran’izao raharaha izao, ny fitondran-draharaha eo anivon’ny fadintseranana no tena iangonan’ny rihitra satria tsy misy ny vola miditra vokatry ny fisian’ny fanambarana hosoka miseholany.
Inona indray ny fanazavana vaovao mety hotanterahin’ny orinasa Tafaray, mba hoentin’izy ireo hanadiovana ny tenany? Na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana, mbola azo atao tsara ny mijery sy mitsirika ireo entana 10 kaontenera ireo, mba hahafantarana marina ny entana nafaran’ny orinasa “Fred Import”. Mandritra izany fotoana izany, mitovy hatrany ny antontan-taratasy miainga avy any Auman mandra-pahatonga aty Madagasikara, saingy miova kosa izany, rehefa tonga ao amin’ny fiantsonana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Manaporofo ny hosoka ireto antontan-taratasy ireto.